Vanorarama neHusope Voomerwa neHupenyu muNguva Ino yeCovid-19
Chikumi 28, 2021
Vanorarama nehusope vanonzi vari kuita dambudziko rekuwana mafuta anochengetedza ganda ravo kuti risaita gomarara.
Kuenderera mberi kwedenda reCovid 19 kwapinza vanorarama nehusope munguva yakaoma sezvo zviri kuvashaisa chekudya pamwe nemafuta avanozora senzira yekudzivirira gomarara reganda, rinova ndiro denda rinonyanya kuvhiringidza hutano hwavo.
Studio 7 yataura nevakawanda vane dambudziko iri, avo vatiwo havana mufaro munzvimbo dzavanogara sezvo vachisarurwa kana kutsvinyirwa nevanhu vavanogara navo kana vavakidzani navo.
Amai Gertrude Alumendo, avo vanogara kuDzivaresekwa Extension, vati vakatizwa nemurume wavo mugore 2014 nekuti haana kutambira zvakanaka kuzvarwa kwevana vavo vaviri avo vanorarama nehusope uye vanofanirwa kugara vakazorwa mafuta anochengetedza ganda ravo.
Amai Alumendo vaendera mberi vachiti vapererwa kuti voita sei nekuti hapana chavari kukwanisa kutengesa kubva gore rakapera apo nyika yakavharwa kubudikidza nechirwere cheCovid 19, uye nerumwe rutivi vachioneswawo nhamo nevaridzi veimba yavanoroja.
Mukuru wesangano reGlobal Aid Missions, Amai Esther Chasi, avo vane vana vaviri vanorarama nehusope, vatsinhira zvataurwa naAmai Arumendo vachiti mudzimai uyu anorarama nemaricho pamwe nekuwacha mbatya dzevanhu kuDzivaresekwa kwavanogara.
Amai Chasi vaendera mberi vachiti ichokwadi kuti mafuta e sunscreen lotion haasi kuwanika sezvaaimboitika zvichikonzerwa nekuvharwa kwenyika kubudikidza nedenda reCovid 19.
Asi VaStephen Nyamapfeka Bandera vekuHatcliffe, avo vane vana vana vanorarama nehusope, vati vakasarudza kumira nemudzimai wavo pakuchengeta vana vavo zvekuti havambozviisa mupfungwa kuti vana ava ndozvavari.
Asi vati kunyange hazvo vachimboedza kuriritira mhuri yavo nepose pavanokwanisa, vasvika pakuomerwa nekuti mari yokuti vana vawane zvese zvinodiwa zuva nezuva pamwe nekuzvikoro kwavo haisi kubatika nekuda kwedenda reCovid-19 iro ravhiringidza zvinhu zvakawanda.
VaBandera vati pakamboitawo hama neshamwari vakamboedza kuvafurira kuramba mudzimai wavo nekuda kwevana vavo asi vakatsidza kumira naye vachiti vakanzwisisa kuti dambudziko iri harisi remubereki mumwechete, asi kuti nderavo vari vaviri.
Muzvare Gamuchirai Uzande, avo vanoshanda nesangano re Alive Albinism Initiative, vati mishonga kana mafuta zvinobatsira vanorarama nehusope zviri kushomeka kana kutoshaikwa zvachose nekuti nyika nemasangano vari mhiri kwemakungwa vanombovabatsira vari kurwisanawo nedenda reCovid 19.
Muzvare Uzande vaendera mberi vachiti nekuda kweCovid-19, sangano ravo gore rino harina kukwanisa kupemberera zuva rekucherechedza vanorarama nehusope kana kuti International Albism Awareness Day, iro rinocherechedzwa musi wa13 Chikumi pasi rose, sezvo mitemo yeCovid 19 isingabvumidze kuungana kwevanhu vakawanda.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vati hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vanorarama nehusope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana nawo.
Doctor Matara vati rubatsiro rwuzhinji rwunonyanya kuwanikwa kubva kumasangano asiri ehurumende asi haazi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga inodiwa nevarapwa ava nokuti anongowana mishoma.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvehutano, Dr. Ruth Labode, vatsigirawo vachiti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanorarama nehusope, uye vaendera mberi vachiti bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga iyi.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvehutano nekurerwa kwakanaka kwevana, VaDonald Mujiri, vaudza Studio 7 kuti pane zviri kuitwa nebazi ravo zvekutsigira masangano akazvimirira kuti akwanise kutenga mishonga iyi kubva kunze kuitira kuti vanhu vanorarama nehusope vabatsirike.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi rezvehutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children’s Fund mugore ra2015 inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama nehusope.